ဟိုတယ်ကြိုတင်မှာ | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဟိုတယ်ကြိုတင်မှာ
You'll find that with each travel excursion you'll need checklists. And more checklists. Each trip getsastandard checklist &arelative one. A short weekend trip to Niagra falls doesn't requireapassport, or does it. You may want to go into Canada to see the Falls from the other side. You checklist would have covered this. You want to fly to vegas for the weekend. break out the checklists. ပဌမ, bookaflight. You live inatime when you can now book flight from th...
ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ဦးခရီးစဉ်များအတွက်စီစဉ်ဖို့ကိုဘယ်လိုအကြောင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အစီအမံအဆိုပါခရီးစဉ်အတွက်မည်သည့်ဒုက္ခကိုရှောင်ရှားရန်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်. ဒါ့အပြင်တစ်ခုခုက-op ပူးတွဲဖို့ဘယ်လိုမှားယွင်းတဲ့တတ်လျှင် & ခရီးသွားအာမခံဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာ.
Start with the basics. Anyone who wants to enjoyahassle-free trip has to start with the basic concern of any traveler - how to handle travel reservations. Here areanumber of tips that may help.
5 သင့်ရဲ့ Coastal အားလပ်ရက်ဒါမှမဟုတ်အခြားခရီးသွား-related စီးပွားရေး Build ကူညီပါရန်နည်းလမ်းများ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, အဆိုပါခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အွန်လိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတူမှတ်ခံရဖို့တစ်အင်အားစုဖြစ်လာသည်. အင်တာနက်ကမ္ဘာတဝှမ်းနေအိမ်များအတွက်နေ့စဉ်ပိုပြီးဘုံကြီးထွားလာမှုနှင့်အတူ, များစွာသောလူအွန်လိုင်းအားလပ်ရက်များအတွက်ရယူရန်နိုင်ပါတယ်, စာအုပ်ပျံသန်းမှု, ကားအငှားလုပ်ငန်း, လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ပျော်စရာခရီးသွားများအတွက်ဟိုတယ်သံသယ cruises နှင့်ပိုပြီး '' - ဘယ်အချိန်မဆို, လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်, 24/7. နှင့်လူများစွာတစ်ချိန်တည်းမှာဒီအွန်လိုင်းခရီးသွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ငွေစီးမှတဆင့်နေအိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်နေသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုသဘောပေါက်နေကြတယ်. ဒါက ...
သင်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်ပြည်နယ်အတွက်တာပေါ့ရှိမရှိ, သင်အမြဲသင်သည်သင်၏လေးတွေအပေါ်စစ်ဆေးသို့မဟုတ်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစကားပြောတာပေါ့ဘယ်လိုစိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်. လူအပေါင်းတို့သည်လုပ်ရတဲ့မေ့လျော့ခြင်းနှင့်ဖွင့်သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုခံစား - ဖြေရှင်းချက်ရိုးရှင်း!
တစ်ဦးက bareboat စင်းလုံးငှားဇိမ်ခံရွက်အားလပ်ရက်ခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, သည်အခြားခရီးသည်များ၏လုပ်ရတဲ့မပါဘဲ. သင့်ရဲ့ခရီးစီစဉ်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတစ်ဦးဦးတည်ရာကို select ရန်ဖြစ်ပါသည်. ဘဟားမားစ်နှင့်ကာရစ်ဘီယန်ရွက်လှေ Chartered များအတွက်ရေပန်းစားနေရာများဖြစ်ကြသည်. မိုင်ယာမီနှင့်ဝိန်း Fort Lauderdale တွင်အများအပြားကုမ္ပဏီများသည်, ဤခရီးစဉ်မှခရီးစဉ်များအတွက်သင်္ဘောများပူဇော်. တစ်ဦး Bareboat ပဋိညာဉ်စာတမ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သင်တစ်ဦးဦးတည်ရာအပေါ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီဆိုတာနဲ့, သင်တစ်ဦးလှေရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. အာဆီယံပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် bro ...
မြို့တွင်း San Diego မှဟိုတယ်
San Diego is one of the places on the earth where you find out that the time just flies by leaving you in the realm of fantasy and enjoyment. This city is an interesting journey altogether and an enchanting experience which makes your visit an everlasting experience down your memory lane. This city is full of skyscrapers, beaches, တောင်များ, flamboyant landscapes and life. It would be no exaggeration to say that you will enjoy every moment being here. It is the second lar...
“မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အိန္ဒိယ’ Pushkar ကုလားအုတ်ပွဲတော်နှင့်အတူ
သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးပဲရစ် Long Term တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်းရှာဖွေခြင်း
အဆိုပါ Posada ကြိုးစားပါ
ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ ‘ Taking Your Camera onaVacation With You
ထိပ်တန်း 10 Beaches of the Costa Tropical, Andalucia, စပိန်
သငျသညျ Las Vegas မှစျေးပေါသောခရီးသွားရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ခရီးစဉ် အကယ်. အချို့သောအကြံပေးချက်များယူ